Burcad badeeda haysata muwaadiniin Spanish ah oo dalbadey $ 10 milyan oo……(sawiro) – SBC
Burcad badeeda haysata muwaadiniin Spanish ah oo dalbadey $ 10 milyan oo……(sawiro)
Koox shufto badeed Soomaali ah oo afduub u haysta muwaadiniin u dhashay wadanka Spain oo ay ka qabsadeen xeebaha badweynta Hindiya ee Jasiirada Comoros ayaa dalbadey lacag madaxfurasho ah oo gaaraysa 10 milyan oo doolar Mareykanka ah. Labadan nin ayaa lagu kala magacaabaa Juan Alfonso Rey Echeverri oo ahaa kabtankii Markabka & Jose Alfos Kaarsiyo Bareero waxaana kooxaha burcad badeedu qabsadeen doonidooda oo lagu magacaabo VEGA 5 oo ku gooshaysay calanka wadanka Mozambique bishii December ee sanadkii hore ee 2010. Burcad badeeda ayaa doonida oo ay sidoo kale saarnaayeen 3 qof oo kaluumaysato ah oo u dhashay Indonesia & 19 kale oo u dhashay dalka Mozambique waxay keensadeen xeebaha Soomaaliya iyagoo sheegay inay ka doonayaan lacag madaxfurasho ah taasi oo ah ganaax ay sheegeen in doonidu ay si sharci daro ah uga kaluumaysaneysay xeebaha Soomaaliya.
4-tii bishii March ee sanadkan 2011 ciidamada badda ee wadamada Hindiya & Spain ayaa weerar waxay ku qaadeen Doonidii ay burcad badeedu haysteen iyagoo ujeedkoodu ahaa in ay badbaadiyaan doonida & dadka saaran. Ciidamada Hindiya ayaa doonida bam ku dhuftey iyagoo dajiyey ama ku quusiyey badweynta waxaana ay badbaadiyeen dadkii ay haysteen kooxaha burcad badeeda Soomaalida iyagoo sidoo kale qabqabtey 61 nin oo lagu sheegay inay ahaayeen dableydii Soomaalida ee haystey doonida.
Laakiin sheekada la yaabka leh waxay aheyd ciidamadii shisheeye ee badbaada wadey waxay ka waayeen dadkii la soo badbaadiyey labadii nin uu dhashay Spain, waxaana ragii shufto badeeda ee la qabtey ay sheegeen in labada muwaadin ee Spanish-ka ah xili hore doonida laga dajiyey oo la geeyey dhanka beriga. Hadaba wariye Cabdalla Maxamed oo ah wariyaha SBC ee magaalada Gaalkacyo ayaa dhawaan booqdey halka lagu haysto labada muwaadin uu Spanish-ka ah waxaana halkaasi la geeyey isagoo indhaha ka xiran, ka dibna wuxuu wareysi la yeeshay dbaleyda Soomaalida ee haysta muwaadiniinta Spanish-ka & ah iyo waliba labada nin. Wareysi kooban oo qaatey 20 daqiiqo ayuu wariyaheenu la yeeshay Juan Alfonso Rey Ajafeeri “ Mudo 3 bilood ah wax war ah kama helin shirkadii aan u shaqayn jirnay iyo dowlada wadanka Spain, waxaan ku suganahay xaalad qatar ah, kooxda na haysata mar mar cabsi galin & caga jugleyn ayay nagu hayaan, waxaan ka codsaneynaa dawlada Spain inay soo fara galiso xaalada aan ku suganahay”.
Dhinaca kale wariye Cabdalla wuxuu wareysi kale la yeeshay afhayeenka kooxda afduubka u haysata muwaadiniinta Spanish-ka ah, ninkaasi oo magaciisa ku sheegay Jimcaale Xaayow wuxuu diidey in wax muuqaal video ah ama sawir laga qaado Waxa uuna sheegay in ay u haystaan labadan nin xad gudub uu sheegay inay ku sameeyn khayraadkii Badda ee Soomaaliya. “Wadanka hadii dawlad ilaalisa aanay jirin masuul ayaaan ka nahay, ciidamada Spain & Hindiya waxay quusiyeen markabkii kaluumaysiga ee Vega 5 oo ay saarnaayeen 81 qof oo ahaa ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya, & 23 kaluumaysato ah oo ajaanib ahaa, gantaalka waxaa ku dhuftey doonida ciidamada Hindiya oo amar ka qaatey kuwa Spain” ayuu yiri Xaayow.
“Waxay ciidamada Spain aaminsanaayeen in Labadan Ruux ee u dhalatay dalkooda ay Markabka la socdaan sidaas ayayna u amreen in Vega 5 La dajiyo dadkoodana loo bad baadiyo iyagoon xitaa dan ka lahayn inta kale nolol iyo geeri waxay ay mutaan wayse Ku Hungoobeen oo dad quburo ah ayaa arintaas horay uga fekaray oo Biriga ayaan Ku haysanay raggan” Ayuu yiri Jimcaale Xaayow Afhayeenka Koxdan isku Magacawday ilaalada Xeebaha Soomaaliya oo mararka qaar ku canaantey saxaafada isagoo yiri “Ima Oran Kartaan Burcad Barkee Aniga Waxaan idnku Tix Galinayaa Saxaafad inaad Tihiin Ha igu Xad Gudbinina Kuwa Burcadda ah Waa kuwan Xeebeheena Xaalufka Ku haya Ana Waxaan Ahay ilaalada Xeebaha Soomliya” Ugu danbaytiina Afhayeenka oo aan Waydiinay dalabkooda Ku aadan Sii danta Muwadainiinta Reer Spin Waxa uu Sheegay in inay Ka doonayaan Hidniya iyo Spin 81Ruux oo Saaxibadooda ah iyo 10Milyan oo Doolarka Maraykanka ah islamarkaana uu ku Sheegay inay tahay Lacagtii Canshuurta ee Badda Soomalaiya.
Warbixinta Keyse Caamir & Cabdalle Maxamed
Sawir Qaadista: Cabdalle Maxamed
@SBC International 2011
aad baan uga xumahay masaakiinta ay haystaan barcadda somalida,,,,,,,,,,,,,,,please hala sii daayo maasaakiintaa waxba idiin ma dhimin ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,wajigiin gubaye
asc dhamaan umada soomaliyeed bacada slaan walaalayaal waxaan leyahay gaalo waa in lalayaa ayaga iyo hantidoodaba, waxaan kula talin lahaa wiilasha qafaashay waxba lacag hakaqadane ee laaya,